Gudoomiyihii guddiga doorashada ee maamul K/ Galbeed iyo ku xigeenkiisa oo Is Casilay
Baydhabo:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhaba ee xarunta KMG ee Maamulka K/Galbeed ayaa sheegaya in gudoomiyihii guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Carfo Ibraahin Aadan iyo ku xigeenkiisa ay is casileen.
Is-casilaaddan ayaa waxaa u xaqiijiey Halgan.net ilowareed muhiima oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay is casilaada ayaa waxay ku soo beeganatay ka dib markii shalay ay guddigu doorashada K/galbeed ay bilaabeen bixinta shahaadooyinka musharrixiinta .
Gudiga doorashada Maamulka K/galbeed ayaa waxay gudoonsiiyeen shahaadada Musharaxnimo ee K/galbeed Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen, oo asna isla maanta iska casilay wasiirka tamarta iyo biyaha dawladda federaalka Soomaaliya.
Illaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay in ay iska casileen xubinimada guddiga doorashada Koofurgalbeed illaa 13 xubin oo guddoomiyaha iyo ku xigeenkiisii ay ku jiraan.
Xubnahan is casilay ayaa ku waxaan la sheegayaa in iscasilaadooda ay salka ku heyso arrrimo la xiriira farogelinta ay DFS ku heyso arimaha doorashada lagu hayo Koofurgalbeed.